ဒါရိုက်တာ ဝင်းလွင်ထက်နဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ကိုပေါက် - VPS - Shweman Online Media
ဒါရိုက်တာ ဝင်းလွင်ထက်နဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ကိုပေါက်
ကိုပေါက်ဟာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နို်င်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး video ခေတ်ကတည်းက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေခေတ်အခုအချိန်အထိ ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေရိုက်ကူးလာတဲ့အရည်အချင်းရှိဒါရိုက်တာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဒါရိုက်တာဝင်းလွင်ထက်ကတော့ သူမတူအောင်ထူးချွန်တဲ့အရည်အချင်းနဲ့ အနုပညာကို ဈာန်ဝင်ခံစားပြီးရိုက်ကူးတတ်တာကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းနာမည်ကြီးလာသလို ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ လူငယ်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရိုးမပေါ်ကျတဲ့မျက်ရည် ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ဒါရိုက်တာဝင်းလွင်ထက်ရဲ့ Box No. 88 ဇာတ်ကားကြီးဟာ ရုံတင်တဲ့ရက်တွေတိုက်နေပြီး နှစ်ကားလုံးကလည်း အပြိုင်အဆိုင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတဲ့ ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေအတွက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်နေတာပါ။ နှစ်ကားလုံးကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပေမယ့်လည်း တစ်ကားပဲကြည့်ဖို့တတ်နိုင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ဘယ်ကားကိုကြည့်ရမလဲဆိုတာ အကျပ်ရိုက်စေမှာပါ။ ဒီိလိုအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ် ကိုပေါက်က သူတို့နှစ်ဦးဟာ ပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ကြောင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။
ကိုပေါက်က သူနဲ့ ဝင်းလွင်ထက်တို့ဟာ ပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ပဲ အပြန်အလှန်လေးစားချစ်ခင်ကြသူတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ နှစ်ယောက်အတူတူအောင်မြင်ချင်ပါတယ်လို့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကိုပေါက်က မကြာသေးမီက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာ ဒါရိုက်တာဝင်းလွင်ထက်နဲ့ နှစ်ဦးသားအပြန်အလှန်ချစ်ခင်စွာပြောထားတဲ့ comment လေးတွေရဲ့ screenshot လေးတွေကိုတင်ပြီး “ကျွန်တော်တို့တွေကပြိုင်ဖက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ကိုပေါက် နဲ့ဝင်းလွင်ထက်သို့မဟုတ်ရိုးမကျတဲ့မျက်ရည် နဲ့ Box no.88ကျွန်တော်တို့၂ယောက်ရဲ့အပြန်အလှန်လေးစားချစ်ခင်ခြင်းအနုပညာ။ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းအောင်မြင်ဖို့ထက်အတူတူအောင်မြင်ချင်တယ်ဗျာ။လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အပြန်အလှန်လေးစားချစ်ခင်ခြင်းတွေနဲ့အလှဆင်ရအောင်။”လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်ကြီးရော ရိုးမပေါ်ကျတဲ့မျက်ရည်နဲ့ Box no. 88 ဘယ်ရုပ်ရှင်ဇာက်ကားကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြမှာလဲ။ နှစ်ကားလုံးကိုအားပေးမှာလား။တစ်ကားပဲရွေးရမယ်ဆိုရင် ဘယ်ကားဖြစ်မလဲ။ပြောခဲ့ကြပါဦး။
ကိုပေါကျဟာ ကရြာဇာတျရုပျကိုအကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနျိုငျတဲ့ သရုပျဆောငျကောငျးတဈဦးဖွဈပွီး video ခတျေကတညျးက ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှခေတျေအခုအခြိနျအထိ ဇာတျလမျးကောငျးတှရေိုကျကူးလာတဲ့အရညျအခငျြးရှိဒါရိုကျတာတဈဦးလညျးဖွဈပါသေးတယျ။ ဒါရိုကျတာဝငျးလှငျထကျကတော့ သူမတူအောငျထူးခြှနျတဲ့အရညျအခငျြးနဲ့ အနုပညာကို ဈာနျဝငျခံစားပွီးရိုကျကူးတတျတာကွောငျ့အခြိနျတိုအတှငျးနာမညျကွီးလာသလို ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ လူငယျဒါရိုကျတာတဈဦးဖွဈပါတယျ။
အခုလကျရှိမှာ ဒါရိုကျတာကိုပေါကျရိုကျကူးထားတဲ့ ရိုးမပျေါကတြဲ့မကျြရညျ ဇာတျကားကွီးနဲ့ ဒါရိုကျတာဝငျးလှငျထကျရဲ့ Box No. 88 ဇာတျကားကွီးဟာ ရုံတငျတဲ့ရကျတှတေိုကျနပွေီး နှဈကားလုံးကလညျး အပွိုငျအဆိုငျစိတျဝငျစားစရာကောငျးနတေဲ့ ဇာတျကားတှဖွေဈတာကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှအေတှကျရှေးခယျြရခကျတဲ့ဇာတျကားတှဖွေဈနတောပါ။ နှဈကားလုံးကွညျ့သငျ့တဲ့ဇာတျကားတှဖွေဈပမေယျ့လညျး တဈကားပဲကွညျ့ဖို့တတျနိုငျတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျတော့ ဘယျကားကိုကွညျ့ရမလဲဆိုတာ အကပျြရိုကျစမှောပါ။ ဒီလိုအပွိုငျအဆိုငျဖွဈနတေဲ့အပျေါ ကိုပေါကျက သူတို့နှဈဦးဟာ ပွိုငျဘကျတှမေဟုတျကွောငျးပွောလာခဲ့ပါတယျ။
ကိုပေါကျက သူနဲ့ ဝငျးလှငျထကျတို့ဟာ ပွိုငျဘကျတှမေဟုတျပဲ အပွနျအလှနျလေးစားခဈြခငျကွသူတှဖွေဈကွောငျးနဲ့ နှဈယောကျအတူတူအောငျမွငျခငျြပါတယျလို့ပွောထားတာတှရေ့ပါတယျ။ ကိုပေါကျက မကွာသေးမီက သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျမှာ ဒါရိုကျတာဝငျးလှငျထကျနဲ့ နှဈဦးသားအပွနျအလှနျခဈြခငျစှာပွောထားတဲ့ comment လေးတှရေဲ့ screenshot လေးတှကေိုတငျပွီး “ကြှနျတျောတို့တှကေပွိုငျဖကျတှမေဟုတျပါဘူး။ကိုပေါကျ နဲ့ဝငျးလှငျထကျသို့မဟုတျရိုးမကတြဲ့မကျြရညျ နဲ့Box no.88ကြှနျတျောတို့၂ယောကျရဲ့အပွနျအလှနျလေးစားခဈြခငျခွငျးအနုပညာ။ကိုယျတဈယောကျတညျးအောငျမွငျဖို့ထကျအတူတူအောငျမွငျခငျြတယျဗြာ။လူ့ပတျဝနျးကငျြကို အပွနျအလှနျလေးစားခဈြခငျခွငျးတှနေဲ့အလှဆငျရအောငျ။”လို့ရေးသားထားတာတှရေ့ပါတယျ။
ပွောခငျြလှနျးလို့ပရိသတျကွီးရော ရိုးမပျေါကတြဲ့မကျြရညျနဲ့ Box no. 88 ဘယျရုပျရှငျဇာကျကားကိုသှားရောကျကွညျ့ရှုအားပေးကွမှာလဲ။ နှဈကားလုံးကိုအားပေးမှာလား။တဈကားပဲရှေးရမယျဆိုရငျ ဘယျကားဖွဈမလဲ။ပွောခဲ့ကွပါဦး။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေခဲ့သူတွေက တော်ရုံတန်ရုံစိတ်ဖိစီးတာမျိုးမကကြောင်း ပြောလာတဲ့ မေဆူးမောင်
ဆယ်ကျော်သက်လေးတစ်ယောက်လို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအယာလေးတွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့ ဝေလာရီ
အဝတ်မပါတဲ့ပုံတွေတင်ပြီး Attention မရှာဖို့ပြောသူကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်